म ६५ वर्ष लागे आझै पनि यौनेच्छा हटेन, अब म के गरु ? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
म ६५ वर्ष लागे आझै पनि यौनेच्छा हटेन, अब म के गरु ?
यसकारण आफ्ना यौनेच्छाका विषयमा श्रीमतीसँग कुरा गर्छु । श्रीमती भने बूढेसकालमा यौनसम्पर्क राख्नु उचित नहुने बताउँछिन् । उनलाई यो उमेरमा मेरो यौनेच्छा बढ्दै गएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।
म आफू पनि आफैंलाई उमेर ढल्केर पनि किन यस्तो भइरहेको छ भनेर सोध्ने गर्छु । कहिलेकाहीँ दिक्क पनि लाग्छ तर यो शरीर नै यस्तो छ त म के गर्न सक्छु ? भनेर चित्त बुझाउँदै आएको छु ।